२ भतिज हरुले, आफ्नै काकी लाई मा,रेको खुलसा ! यस्तो रहेछ रहस्य ?
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ४, की मनकला खत्री खड्कालाई आफ्नै जेठाजुका छोरा (भतीजहरु)ले ह‘त्या गरेको खुलेको छ।
साउन ११ गते सोमबार २६ वर्षीया खड्काको घ`टनामा भतीजहरुको नै हात रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । घर नजिकै गोठमा रहेका भैंसीलाई घाँस हाल्न गएकी खड्काको ह‘त्या भएको अवस्थामा उनको श`व भेटियो ।
त्यसको २ दिनपछि अ’परा’धी पत्ता लागेका छन् । प्रहरीले मुसिकोटमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी घ`टनाबारे सार्वजनिक गरेको हो । मृ`तक खड्काकै सहोदर भतीजा जेठाजुका दुई नाबालक छोराले उनको ह‘त्या भएको खुलेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
१५ र ११ वर्षका दुई सहो,दर दाजु-भाइ मिलेर मनकलाको ह‘त्या गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । नाबालक भएकाले प्र,हरीले उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । मृ`त`कले घाँ‘टी, नाक, कानमा लगाएको गरगहना समेत ती दाजुभाइले घरमा राखेको भेटिएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
प्रारम्भिक अनुस,न्धानबाट दाजुभाइको सं’लग्न’ता देखिएको र बाँकी अनुसन्धान भने भइरहेको प्र,हरीले जनाएको छ । पुरानो रिसिवी र परम्परागत मान्यताका का,रण घ´ट`ना भएको नि`ष्क`र्ष प्रहरीको छ ।
केही समयअघि मृ`त`क खड्काले १५ वर्षीय ती भतीजलाई १५ हजार नगद चो`री गरेको आ’रोप लगाएपछि रिसिबी साँ’ध्न घ`टना भएको प्रहरीको भनाइ छ । घ`टना भएको दिन मृ`त`कले दाजुभाइले का‘टेको घाँस ना`घेपछि रि’सको आवे`गमा अन्टीलाई खु‘र्पा हा‘नेको स्वी`कार गरेको डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
मनकलाको ह‘त्या भएपछि ती दाजुभाइ मृ`त`कको कोठामा गएर बाकस समेत खोलेको पुष्टि भएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले सुरुमा तीन बाबु छोरालाई सोधपुछका लागि ल्याएको थियो । बाँकी अनुस`न्धान हुँदै जाने भनेर दुई दाजुभाइले ह‘त्या गरेको विवरण प्रहरीले पत्रकार सम्मे`लन गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
घ`टना अनुसन्धानका लागि प्रहरी तालिमप्राप्त कुकुर झिका`एको थियो । त्यस्तै प्रहरीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट अनुसन्धन ब्यु`रो टोली आएको थियो । मृ`त`कका श्रीमान बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा देश बाहिर छन् । उनका सात वर्षका छोरा र सासू घरमा छन् । अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
२०७८ श्रावण १५, शुक्रबार २१:११ 1 Minute 118 Views